Ọzara dị n'ihe ize ndụ site na mgbanwe ihu igwe | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọzara egwu okpomoku zuru uwa egwu
Ọ dịghị onye ga-asị na enwere ike iyi ọzara egwu, nri? Ma eziokwu bụ na ha bụ ebe ọtụtụ ihe na-emebi emebi karịa ka anyị nwere ike iche n’echiche. Osisi, anumanu na ihe ruru nde mmadu 500 bi na mpaghara ndi a abanyela na ihu igwe.
Ma ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ na-arị elu, ndụ ha ga-anọ n'oké ihe ize ndụ.
Dabere na akụkọ UN maka gburugburu (UNEP), site na 1976 ruo 2000, nkezi okpomọkụ nke ọzara arịgogo n'etiti 0 na abụọ ogo centigrade, n’adịghị ka ogo 0 ọ gbagoro na mbara ụwa ndị ọzọ. Mmetụta griin haus na-ebute oke mmiri ozuzo na ogologo oge, yabụ mmiri ozuzo dị ugbu a na-adịwanye obere.
Ọzara kachasị emetụta bụ Kalahari na Africa, na Atacama na Chile. N'ime ha abụọ ị ga - ahụ etu ndụ si anwa ịlanarị. Ma ọ bụghị naanị ha ka ọ metụtara. Mbelata nke mmiri na-eme ka osimiri taa, dị ka Naịl dị n’Ijipt, ma ọ bụ Colorado dị na United States. UNEP dọrọ aka na ntị na ọ bụrụ na anwuru ahihia gas, mmiri ga-emetụta oke mmiri, na-etinye ahụike nke ndị bi n'ọzara, yana ihe ọkụkụ ha na anụmanụ ha n'ihe egwu.
Ọ bụrụ na anyị anọgide na-ebufe oke mmiri mmiri, na -emepụta akụrụngwa, ma ọ bụ ebe ọzụzụ nke ndị agha, anyị nwere ike ịgbanwe mpaghara ahụ kpamkpam. N'agbanyeghị ihe niile, Kaveh Zahedi, osote onye isi nke World Conservation Center (UNEP), na-ekwu na ọzara nwere ike ịghọ osisi ike nke narị afọ a, na mgbakwunye na njem dị ka ebe nlegharị anya, ma ọ bụ ọbụna ịchọpụta ọgwụ ọhụrụ nwere ike ime ka ndụ ndị mmadụ ka mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Ọzara egwu okpomoku zuru uwa egwu
Kedu mba nke oke ifufe na-ebukarị? Chọpụta!
Mmiri mmiri na Europe dị njọ karịa ka a tụrụ anya ya